သင်ဟာ ဘဝလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာ (၈)ချက် - Lifestyle Myanmar
ကိုယ်က ဘဝလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်နေတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဘဝက ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆက်ဖို့ သင်ယူရမယ့် သင်ခန်းစာတွေကို ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲတွေက လက်ခံဖို့ အရမ်းခက်ခဲပုံရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်လက်ခံပြီးတာနဲ့ ဘဝလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်နေပြီဆိုတဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုကို သင်ရရှိပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့ကြောင့် သင်ဟာ လက်ရှိမှာ ဘဝအပြောင်းအလဲကြီးတွေကို ကျော်ဖြတ်နေရပြီး သူတို့ကို ဆက်ရှင်သန်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ မသိရင် ဒီအရာတွေက သင်ခန်းစာယူဖို့နှင့် ပတ်သတ်လို့ ညွှန်ပြနေတဲ့ ခံစားချက် (၈)ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ အထီးကျန်မှု ခံစားရတာ အဆင်ပြေပါတယ်
အခြေအနေတွေက ထိန်းချုပ်မှုမှ လွတ်ထွက်သွားတဲ့အခါ လက်လွတ်လိုက်ရတာက အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘဝအပြောင်းအလဲတွေက သူတို့နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့၊ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့ အချိန်လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သင့်ကို ဘယ်သူမှ နားမလည်တဲ့ ခံစားချက်တွေရှိတာက လုံးဝပုံမှန်ပါပဲ။
အထီးကျန်ခြင်းက သင်တစ်ယောက်တည်းလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အနားမှာ ဘယ်သူမှ မရှိရင်တောင် သင့်ကို ကျောထောက်နောက်ခံပေးမယ့် ဆွေမျိုး၊ မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အမြဲရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ တစ်ယောက်တည်းနေတတ်ဖို့ ၊ ခံစားချက်တွေကနေ အတွေးတွေကို စီစစ်ဖို့ အချိန်ယူပါ။
၂။ ခံစားချက်မကောင်းပေမယ့် မဆိုးပါဘူး
ဒီခံစားချက်က ဘဝလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်နေတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုပြောနိုင်လဲ? ကောင်းပါပြီ။ သင်စိတ်ဓါတ်ကျတဲ့အချိန်မှာ သင့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ အတွေးတွေက ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိပါဘူး။ သင်ဘာကြောင့် ဒီလိုခံစားနေရလဲဆိုတာကို သင်တကယ်မရှင်းပြတတ်ပါဘူး။ ဒါက သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို ဘာ့ကြောင့်မုန်းသလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြဖို့ ပျက်ကွက်တာနဲ့ တူပါတယ်။
သင်ဟာ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ (သို့) အရှိအရှိအတိုင်း ရှင်းပြနိုင်တဲ့ အခြားအရာတွေနှင့်ပတ်သတ်လို့ မကောင်းတာကို စပြီးခံစားရရင် သင်ပိုကောင်းလာတာပါ။ တကယ်တော့ မကောင်းတဲ့ ခံစားချက်က သင့်ကို ပိုထက်မြတ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုးမြင်တဲ့ အချိန်တွေကို သင်အာရုံစိုက်စရာမလိုပါဘူး၊ တကယ်တော့ ဒါက သင့်ပြဿနာချည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး။
၃။ အရာအားလုံးက ကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲဆိုတာ နားလည်ပါတယ်
ကိုယ်က အရာအားလုံးကို အကောင်းဖက် ပြောင်းလဲပစ်နိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုတာ သဘောပေါက်လာတဲ့အခါ မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ စတင်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်အတွက် ဘယ်သူမှ လုပ်ပေးဖို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ သင့်သူငယ်ချင်းတွေတောင် သင့်ပြဿနာတွေကို နားထောင်ပေးဖို့ အရမ်းအလုပ်များနေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်က ကိုယ့်ကံကြမ္မာရဲ့ဗိသုကာတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ ဒါကို သင်နားလည်ရင် ကောင်းတဲ့လက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ထက် ဘယ်သူမှ သင့်အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အမြင်သစ်၊ နေထိုင်မှုပုံစံအသစ်ကို ပျိုးထောင်ပါ။ စတိုင်ကျတဲ့ အဝတ်အစားကနေ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသစ်အထိ ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အနာဂတ်အတွက် သင့်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပျော်မွေ့ခြင်း၊ လေ့လာခြင်း၊ အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ အနာဂတ်ကို ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က အဲ့ဒါကို စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ခန္ဓာဗေဒ (emotional anatomy)လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက သင့်ပခုံးပေါ်မှာ လေးလံတဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေ ဖန်တီးပါတယ်။ ဒီခံစားချက်ကို သိကျွမ်းခြင်းက သင့်မှာ အပြောင်းအလဲတွေအတွက် ရှင်သန်ဖို့ အခွင့်အလမ်းရှိနေတဲ့ သတိပေးလက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ အလျဉ်းသင့်သလို ယုတ္တိမရှိတဲ့ ခံစားချက်တွေ ကြုံဖူးပါတယ်
ကျွန်တော်တို့က ယုတ္တိမရှိတဲ့ ခံစားချက်တွေလို့ပြောတဲ့အခါ ဒေါသ၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းစတဲ့ ရုတ်တရက် ပြင်းထန်သော စိတ်ခံစားချက်တွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ သင့်ဒေါသရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီလိုဂယက်တွေက သင်ဟာ psycho တစ်ယောက်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဒါက ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို စတင်ဖော်ပြဖို့ ခြေလှမ်းကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ အချက်တွေကို သတိထားမိတာက အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါက သင်ဟာ ပြဿနာတွေကို ဖော်ထုတ်ပြီး သူတို့မှတဆင့် လုပ်ဆောင်ရင်း ရှင်သန်နေတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
၅။ တစ်ယောက်တည်းနေချင်တဲ့ ဆန္ဒကို ချိုးနှိမ်ထားပါတယ်
လူတိုင်းက အထီးကျန်မှုကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါက အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီခံစားချက်ကို ချိုးနှိမ်တဲ့အခါ ပိုကောင်းနေဆဲပါ။ သင်တစ်ယောက်တည်း ကြာရှည်နေချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အပြင်ထွက်ပြီး လူတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံပါ။ ဒါက မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဆင့်မှာ ပါဝင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ သင့်ရဲ့အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းပြီး ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြင်ဆင်တဲ့အခါ အဲဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါပဲ။ ဘယ်ကနေ စရမှန်းမသိဘူးဆိုရင် သင့်ပြဿနာတွေကို တိုက်ထုတ်ဖို့ အစီအစဉ်တစ်ခု လုပ်ပါ။ ဒါက သင့်ရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၆။ သင်ဟာ ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ ရည်မှန်းချက်မဲ့သလို ခံစားရပါတယ်
မထိတ်လန့်ပါနဲ့။ တစ်ခါတစ်ရံ အကူအညီလိုသလို၊ ဆုံးရှုံးသလို ခံစားရတာက အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါက အကူအညီမဲ့သလို ခံစားရတာနဲ့ မတူပါဘူး။ ပျင်းရိခြင်းလိုပဲ ဒီခံစားချက်တွေမှာ အားသာချက်ကောင်းရှိပါတယ်။ အဲဒါက သင်ဟာ လုပ်ဆောင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ အခွင့်အလမ်းသစ်တွေနဲ့ ရွေးချယ်မှုသစ်တွေကို မြင်ရပါမယ်။ စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင်ထားပါ။ သင့်ခံစားချက်တွေကို ရင်မဖွင့်ပါနဲ့။
၇။ အစီအစဉ်တွေ တည်ဆောက်ဖို့ မကြောက်ပါနဲ့
ရုတ်တရက် ဘဝအပြောင်းအလဲတွေက အနာဂတ်အတွက် အစီအစဉ်တွေ တည်ဆောက်ခြင်းကနေ သင့်ကို စိတ်ပျက်အားလျှော့စေနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ဒီခံစားချက်က ယာယီသာဖြစ်ပြီး အပြောင်းအလဲတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ်ကို သင်အဖြေရှာပါလိမ့်မယ်။
သင်က လက်တွေ့အဆန်ဆုံးအိမ်မက်တွေကိုတောင် မကြောက်တော့ဘူးဆိုရင် သင့်ဘဝက လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကို ရောက်နေပါပြီ။ အိပ်မက်ဆိုးတွေကို relax ဖြစ်ဖို့ သာယာတဲ့ အိမ်မက်အဖြစ် ပြောင်းနိုင်ရင်၊ အာရုံစိုက်နိုင်ရင် ဒါက ကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါပဲ။ သင့်အိပ်မက်တစ်ချို့ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို အသေးစိတ်ပြန်သတိရတာက အပိုတိုးတတ်မှု တစ်ခုပါ။ အိပ်မက်က သင့်ရဲ့မသိစိတ် အတွေးတွေကို ပေါ်လွင်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်မြင်တဲ့အရာကို အာရုံစိုက်ပါ၊
၈။ သင့်စိတ်ကူးတွေအတွက် ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်
သင်မှန်တယ်ထင်တဲ့အရာကို သင်လုပ်တဲ့အခါ အဲဒါက အရမ်းကောင်းတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေရဲ့ အကြံဉာဏ်ကို ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းလုပ်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း လိုက်လုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ သူတို့ရဲ့အတွေးတွေကို ဝေမျှဖို့၊ သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးတွေအတွက် ရုန်းကန်ဖို့ မကြောက်တဲ့သူတွေဟာ အခက်ခဲဆုံး ဘဝစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ပြီး ရှင်သန်နိုင်ကြပါတယ်။